Qabuura Galeenka Galguduu oo qarka u saaran in ay dhaxdooda dagaalamaan iyo Shabaabul Mujaahidiin oo dhaq dhaqaaqyo wado. | Halganka Online
Qabuura Galeenka Galguduu oo qarka u saaran in ay dhaxdooda dagaalamaan iyo Shabaabul Mujaahidiin oo dhaq dhaqaaqyo wado.
Kooxaha Qabuuriyiinta Mushrikiinta ah ayaa qarka u saaran in ay ku dagaalamaan gacan ku haynta deegaano katirsan Gobalka Galguduud bartamaha dalka Somalia kadib khilaaf soo kala dhaxgalay.
Mushrikiinta qabuura Caabudka ah ayaa isku khilaafsan Heshiiskii ay Addis Ababa kusoo galeen Kooxda Riddada iyo garab katirsan Qabuuriyiinta Mushrikiinta ah waxaana taagan xaalad colaadeed oo labada dhinac u dhaxaysa.
Shalay gelinkii dambe ayay degmada Guriceel dib ugusoo laabteen Wafdi Mushrikiinta u metelayay Heshiiskii Addis Ababa balse waxaa durbadiiba degmada C/waaq looga dhawaaqay Bandaw ay Mushrikiinta kale uga feejignaanayaan saamayn ay ku yeeshaan kuwa kale ee Guriceel jooga.
Warar Andalus ay ka heshay C/waaq ayaa xaqiijinaya in Maleeshiyaadka magaalada haysta ay difaacyo dhigteen tuulo u dhaxaysa Guriceel iyo C/waaq si ay uga hortagaan weerar uga yimaad Mushrikiinta kale ee ku sugan Guriceel.
Labada dhinac ee dhamaantood Itoobiya ku xiran ayaa isku maan dhaafsan Heshiiskii gacan ku rimiska ahaa ee dhawaan Addis lagula galay Kooxda Riddada ee uu hogaamiyo Shariif Axmed.
Dhinaca kale cutubyo katirsan ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wado hareeraha degmada Guriceel waxaana saacad walba dhici kara dagaal ay Mujaahidiintu kula wareegaan degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb
« Kaluumaysatada Gobalka J/Hoose oo Cabasho ka Muujinaya dhibaato ay ku hayaan Ciidamada Gaalada ah ee Xoogga ku jooga Biyaha Somalia. Dowladda Riddada iyo AMISOM oo bilaabay in ay Barakiciyeen Dadka ku nool Xeradii hore ee Afisyooni magaalada Muqdisho. »